Essential Elements of Good Construction Contracts & How to Write them | Phoe Phyu & Associates
HomeBlogsPhoe Phyu's blogEssential Elements of Good Construction Contracts & How to Write them
တကယ်ဆို ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆိုတာ အလွဲအမှား မများကောင်းပါဘူး။ အဆောက်အဦးကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာအောင် အပိုအလိုမရှိ စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ကြားက နည်းနည်းလေး လွဲချော်တာနဲ့ အလျော်အစားက "ဟာတွေ ဟင်တွေ" ဖြစ်ကုန်မှာပါ။
ဒီလိုဖြစ်နိုင်ချေတွေကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ကာကွယ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဆုံးရှုံးမှုနည်းအောင်တော့ လုပ်ထားဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းကိစ္စတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုရင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ အငြင်းပွားမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် စတာတွေကို သတ်မှတ်ဖို့၊ ထိန်းချုပ်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အတွက် အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ စာချုပ်တွေကို ချုပ်ဆိုရပါတယ်။
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ စာချုပ်များစွာ ရှိတဲ့အထဲကမှ အဓိကကျတဲ့ စာချုပ်အမျိုးအစားတချို့ကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့မှာ ..
- ဆောက်လုပ်မယ့် လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ မြေရှင်တို့ကြားက စာချုပ်၊
- ဆောက်လုပ်ပြီး/ မဆောက်လုပ်ခင်က ရောင်းချထားသော အခန်းများအတွက် ဝယ်သူနဲ့ ကန်ထရိုက်တာ အကြားက စာချုပ်၊
- သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေက စည်ပင်ခွင့်ပြုချက်ဆိုင်ရာ စာချုပ်
- Constructor နဲ့ Subconstructor တို့ကြားက စာချုပ် (ပန်းရံ၊ လက်သမား၊ ဆေးသုပ်၊ လျှပ်စစ်သွယ်၊ အလှဆင် စတဲ့ အလုပ်တစ်ခုချင်းအတွက် subconstructor တွေနဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်အကြားက စာချုပ်)
- ပစ္စည်းပေးသွင်းသူနဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြားက စာချုပ်
စသဖြင့် ရှိကြပါတယ်။ ဒီလိုစာချုပ်တွေမှာ ဘယ်လိုအရာတွေပါမလဲ၊ ဘာတွေ သိထားသင့်လဲဆိုတာကိုတော့ အောက်မှာ လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။
Construction contract ရဲ့အဓိက element လို့တောင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းမှာပါဝင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေအပြင် အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်း၊ အရည်အသွေး၊ အဆင့်အတန်း၊ အလုပ်အချိန်ဇယားတွေ စတာတွေကို အသေးစိတ် ပါဝင်ရပါတယ်။
2. Full Name,Address,License and Signatures of Both Parties
ဒီတစ်ခုကတော့ တချိန်ချိန်မှာ လိုအပ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ် စာချုပ်ချုပ်ပြီး တွဲလုပ်သူဟာ တရားဝင် ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိစ္စမရှိပေမယ့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုရင်တော့ နင်ဘယ်သူလဲ ငါဘယ်သူလဲနဲ့ အမြတ်ထုတ် ခံသွားရပါလိမ့်မယ်။ ဆိုတော့ စတည်းက လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ယူထားတာကလည်း မမှားတော့ဘူးပေါ့။ ခင်လို့ဖြစ်တဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့တော့ စီးပွားလုပ်ငန်းကို သွားရောထွေးလိုက်တာမျိုး လုပ်လို့တော့ မရပါဘူး။
3. Project Cost and Payments Terms
ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာ ငွေကြေးဆိုတာ ထိပ်ဆုံးကနေ အရေးပါဆုံးအရာအဖြစ် နေရာယူထားတဲ့ အချက်တစ်ခုလို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ ဒီ Area မှာ ဆောက်လုပ်နေတဲ့ Project က ဘယ်လောက် ကုန်ကျမယ်၊ ဘယ်ချိန်တွေမှာ ငွေပေးချေမှု ပြုလုပ်ရမယ် စတဲ့ ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေကို တိတိကျကျ သတ်မှတ်ထားရပါမယ်။ ပရောဂျက် တဝက်တပြတ်ကြီးနဲ့ ငွေပေးချေမှု ရပ်တန့်သွားတဲ့အဖြစ်ကို ဘယ်သူမှ မကြုံချင်ကြပါဘူး။
Project စတင်မယ့်ရက်၊ လုံလောက်တဲ့ အချိန်အပိုင်းအခြားကို တိတိကျကျသတ်မှတ်ပြီး ပြီးဆုံးမယ့်ရက် ဒါမှမဟုတ် အချိန်ကာလကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြပြီး ထားဖို့လိုပါတယ်။ ပြီးမှ တကယ်နောက်မကျပါပဲ စာချုပ်စာတမ်း အကြောင်းအရာကို မစိစစ်မိတဲ့ မှားယွင်းမှုကြောင့် နောက်ကျသလို ဖြစ်သွားရင် လျော်ရမယ့်ကိစ္စက မိအေး ၂ခါနာမယ့် အဖြစ်မျိုး ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ပရောဂျက်က ကြီးလာတာနဲ့အမျှ လုပ်ဆောင်ရမယ့် အရာတွေကလည်း ပိုပြီး ရှုပ်ထွေး များပြားလာတတ်ပါတယ်။ ဒီလို ရှုပ်ထွေးမှုတွေကြားထဲကနေ မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် လုပ်ငန်း တာဝန်တွေကို လုပ်ဆောင်မယ့်သူဟာ ဘယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပါ ထည့်သွင်း ရေးသားရမှာပါ။
ငွေပေးချေဖို့ နောက်ကျတာ၊ တချို့သော စည်းကမ်းချက်တွေကို ချိုးဖောက်ရင် လျော်ကြေး၊ ဒဏ်ငွေ ပေးဆောင်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သတ်ပြီးလည်း ဖော်ပြထားဖို့လိုပါတယ်။
5. Recovery Fund Disclosure
ကန်ထရိုက်တာရဲ့ ဥပဒေမဲ့ အပြုအမူတွေကြောင့် ပရောဂျက် ပြီးဆုံးသွားသည့်တိုင် ရလာဒ်က ရှုံးနေတယ်ဆိုရင်တောင် ကိုယ်ရသင့်တဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေ ဘယ်လို ရှိတယ်ဆိုတာ အကြမ်းဖျင်း ဖော်ပြထားရမှာပါ။ ဒါကတော့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း စာချုပ်အများစုမှာ ပါကို ပါသင့်ပါတယ်။
6. Disputes & Termination
ဒီမှာကတော့ ကိုယ်နဲ့ ဒီလုပ်ငန်း ပါဝင်ပတ်သတ်သူတွေ ကြားမှာ အငြင်းပွားစရာ ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာခဲ့ရင် ဘယ်လို ဖြေရှင်းမှုမျိုးကို ခံယူပါ့မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားရပါမယ်။ အဲ့ဒီအတွက်လည်း အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ လုပ်ရထားမှာပါ။
law firm အဖွဲ့ တစ်ခုခုရဲ့ ဥပဒေအကြံပြုချက်နဲ့ ကြားဝင် ဖြန်ဖြေမှုတစ်ခုခုကို စတင် ရယူတာမျိုးလား။ အဲလိုမှ အဆင်မပြေသေးရင် ခုံသမာဓိ အဖွဲ့ တစ်ခုခုရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကြားနာပါ့မယ် ဆိုတာမျိုးလား။
ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတိုင်းမှာ ကန်ထရိုက်တာဘက်က ကိုယ့်အလုပ်သမားတွေအတွက် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လျော်ကြေး၊ နစ်နာကြေး စတာတွေကို သေချာ အာမခံထားသင့်ပါတယ်။ ဒီလို ရှိထားမှလည်း ထိခိုက် ဒဏ်ရာရတဲ့အခါမျိုးမှာ Owner အနေနဲ့ သေချာ ဖြေရှင်းလို့ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
8. Warranties & Statute of Limitations
ကန်ထရိုက်တာတွေအနေနဲ့ ရှေရှည်ကို ကြည့်ပြီး ဘယ်လို အာမခံဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေကို အသုံးပြုရမယ်ဆိုပြီး သေသေချာချာ စီစဉ်ထားသင့်ပါတယ်။ အချုပ်အားဖြင့် Warranty သုံးနှစ်တာ ကာလအတွင်းမှာ စာချုပ်ထဲက ကတိကဝတ်ကို ဖောက်ဖျက်ရင် ကိုယ်ရသင့်ရထိုက်တာတွေကို ကန့်သတ်ထားလား၊ ကန့်သတ်ချက်တွေရှိလား ဆိုတာကိုလည်း ဝေခွဲထားရပါမယ်။
ကဲ ဒီလောက်ဆို construction contract တစ်ခုမှာ မဖြစ်မနေ ပါဝင်သင့်တဲ့ အခြေခံတွေကို လေ့လာမိလောက်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါ့ထက် ပိုကျယ်ပြန့်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေလည်း ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ ဆက်လေ့လာကြတာပေါ့။ ခုဆက်ဖေါ်ပြမယ့် နောက်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတော့ Consrtuction Contract တစ်ခုကို ဘယ်လို ရေးဆွဲရမလဲဆိုတဲ့ အချက်တွေကို ဆက်လက် ဆွေးနွေးပါ့မယ်။ မိတ်ဆွေတို့လည်း ပါဝင်ဆွေးနွေး ဝေဖန်ပေးဖို့၊ သတိပြုစရာတွေကို Comment Box မှာ မျှဝေပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချက်တွေက ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ပိုင်ရှင်မှပဲ သိထားရမယ်ဆိုပြီး တွက်ထားလို့ မရပါဘူး။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်ဖို့ လိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ လိုတာပဲဖြစ်ဖြစ် မှန်ကန်တဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်ငန်းနည်းတွေ နားမလည်ထားရင် အင်မတန် ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။
အခုလို ဆောက်လုပ်ရေးလောက၊ အိမ်ခြံမြေလောက မတည်မငြိမ် ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာ ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေဆိုတာ သိကို သိထားသင့်ပါတယ်။ လေ့လာဖို့ အချိန်မမျှနိုင်ရင်တောင်မှ နားလည်းတတ်ကျွမ်းသူတို့နဲ့ တိုင်ပင်လုပ်ဆောင်ထားရမှာ ကိုယ့်တာဝန်ပါ။ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခု လုပ်တော့မယ်။ ဒါဆို ဆိုင်ရာပိုင်ရာသူတွေနဲ့ စာချုပ်စာတမ်းတွေ ချုပ်ဖို့လိုလာပြီဆိုတော့ ကိုယ်က ဦးအောင် ချုပ်မှာလား၊ ကိုယ့်ကို ပြန်ချုပ်တာ ခံမှာလား။ ဘယ်သူမှတော့ ကိုယ့်ကို လာချုပ်တာ မခံချင်ကြပါဘူး။ အတူ အပြန်အလှန် တာဝန်ယူကြတာမျိုးပဲ ဖြစ်ချင်ကြမှာပါ။
စာချုပ်ချုပ်ဖို့ စာချုပ်ရေးရပြီ၊ အဲ့စာချုပ်ထဲမှာ ဘာတွေထည့်ရမယ် ဘာတွေပါရမယ် ဆိုတာကိုတော့ ဗဟုသုတအနေနဲ့ သိကို သိထားရမှာပါ။ ကိုယ့်ရှေ့နေက ချုပ်ပေးသည့်တိုင်အောင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကပါ သိနေတော့ ပိုမကောင်းဘူးလားဗျာ။
ဒါဆိုရင် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ စာချုပ်တစ်ခု ဘယ်လိုရေးသားမလဲ?
နားလည်လွယ်အောင် အပိုင်း နှစ်ပိုင်းခွဲပြီး ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Writing Your Construction Contract
(1) Write the title andalittle preamble
ပထမဦးစွာ စာချုပ်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဖော်ပြတဲ့ Title တစ်ခုရေးပါ။ ပြီးရင်တော့ စာချုပ်ကို စတင်တဲ့အနေနဲ့ နိဒါန်းတစ်ခု ရေးရပါမယ်။ ဒါကလည်း သိပ်ခက်ခက်ခဲခဲကြီး စဉ်းစားနေစရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီစာချုပ်မှာ လက်မှတ်ရေးထိုးမယ့်သူဟာ ဘယ်သူတွေဖြစ်တယ်၊ ဘယ်လုပ်ငန်း၊ ဘယ်ရာထူး၊ လုပ်မယ့် ပရောဂျက်၊ တည်နေရာ၊ ပရောဂျက် စတင်မယ့်ရက်၊ အဆုံးသတ်မယ့်ရက် စသဖြင့် ရေးသားပြင်ဆင်မှုနဲ့ စတင်ရပါမယ်။
(2) Describe the work that will be done
ပြီးတာနဲ့ မိတ်ဆွေတို့ လုပ်ဆောင်မယ့်၊ ဖော်ဆောင်မယ့် ကိစ္စအတွက် စက်ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်လိုနေရာမှာ ဘာအတွက်သုံးမယ်၊ အရည်အတွက်၊ အရည်အသွေး၊ အကြောင်းအရာ အပြည့်အစုံကို တိတိကျကျ ချရေးထားဖို့ လိုပါတယ်။
(3) Include financial information
ဒါတွေ ရေးပြီးရင်တော့ ဘတ်ဂျက်အတွက် ခရေစေ့တွင်းကျ တွက်ချက်ဖို့ လိုပါပြီ။ လုပ်ငန်း ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်ရာမှာ လိုအပ်တဲ့ ငွေကြေးပမာဏ ဘယ်လောက်ဟာ Owner သို့မဟုတ် Client တွေက ကျခံရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောတူညီချက်ကိုလည်း တပါတည်း ထည့်ရေးရမှာပါ။ ဒါ့အပြင် စာချုပ်စာတမ်းဖိုး၊ လုပ်ငန်းကာလအတွင်း ငွေပေးချေရမယ့် စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်၊ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပေးချေရမယ့်ပမာဏ စတဲ့ ကုန်ကျငွေတွေကို သေသေချာ ရေးဖို့တော့ လိုပါတယ်။
(4) Include payment due dates and fees
ဘတ်ဂျက် ပမာဏကို တွက်ချက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ အဲ့ဒီဘတ်ဂျက်ကို ဘယ်နေ့၊ ဘယ်ရက်မှာ စတင်ပေးဆောင်တယ်၊ ဘယ်နှလ တစ်ခါပေးချေရမယ်စတဲ့ အချိန်ကာလတွေနဲ့ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ငွေပေးချေတယ် စတာတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြည့်စွက်ရပါမယ်။
(5) Provideaproject description
ဒီအပိုင်းမှာတော့ ပရောဂျက်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်၊ တာဝန်တွေကို ဖော်ပြပေးရမှာပါ။ အကျယ်တဝင့် အသေးစိတ် ရေးစရာမလိုပါဘူး။ ပရောဂျက်ရဲ့ တာဝန်ကို အကျဉ်းချုပ်တော့ ဖော်ပြပေးရပါတယ်။
(6) Describe how any changes to the work order will be handled
Owner/ Client တို့ကြောင့် မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အလုပ်နဲ့ အပို ကုန်ကျစရိတ်တွေ ပေါ်လာခဲ့သည်ရှိသော် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကာကွယ်အနေနဲ့ စည်ကမ်း သတ်မှတ်ချက်တချို့ကိုလည်း ထည့်သွင်းဖော်ရပါမယ်။
(7) CreateaSignature Line
ဒါကတော့ စာချုပ်ပါ အကြောင်းအရာတွေကို သဘောတူညီကြောင်း ဖော်ပြဖို့အတွက် Sign ထိုးဖို့နေရာ ထားထားပေးရမှာပါ။ လက်မှတ်အောက်မှာ လက်မှတ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်တို့ကိုလည်း ထည့်သွင်းနိုင်ပါသေးတယ်။
(1) Check your state law for required inclusions
နေရာဒေသ၊ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ စာချုပ်စာတမ်း ဥပဒေသတွေက တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု မတူညီကြပါဘူး။ ဒီတော့ စာချုပ်စာတမ်းမှာပါတဲ့ ဥပဒေဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကလည်း အဲ့နယ်မြေမှာ ကျင့်သုံးနေတဲ့ ဥပဒေနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးကြည့်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။
(2) Provideaprojected construction schedule
ချုပ်ဆိုမယ့် စာချုပ်ထဲမှာ ဘယ်နှစ်ရက်အတွင်း အလုပ် ဘယ်လောက်ပြီးရမယ်ဆိုတာကို ထည့်သွင်းရပါဦးမယ်။ တစ်ရက်ကို ဘယ်အလုပ်တွေ ပြီးတယ်၊ ဘယ်လောက် အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အချိန်ဇယား တစ်ခုကတော့ လိုအပ်ပါတယ်။
သာမာန် လူတစ်ယောက်အတွက်ဆို ဥပဒေဆိုင်ရာ ကိစ္စဆိုတာ တော်တော်ကို ရှုပ်ထွေးတဲ့အပြင် စာချုပ် ပြင်ဆင်ရေးဆွဲတယ်ဆိုတာလည်း တော်တော်ကို ခေါင်းခဲစရာပါ။ စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေတို့လဲ ဒီလောက်ထိ ဖတ်လာပြီးရင် သိလောက်ပါပြီ။ ဒီအထိ ဖတ်လာပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးအထူးတင်မိသလို၊ မိတ်ဆွေတို့အတွက် အကျိုးရှိဖို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခေါက်မှာတော့ အခုဖော်ပြထားတဲ့ စာချုပ်ကို ဘယ်လိုအကြောင်းအရာ ပြဿနာတွေကနေ ကာကွယ်ဖို့အတွက် ဘာကြောင့် ချုပ်သင့်တယ်၊ ဘာတွေ သင်ခန်းစာယူပြီး တရားဝင်ခိုင်မာအောင် လုပ်သင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်လို့ ဆက်လက် ဖတ်ရှု အားပေးကြပါဦး။
ခင်ဗျားတို့ရဲ့ စီးပွားဖက်၊ ကျောချင်းကပ် မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း